मेक्सिको - ALinks
क्यानाडा बाट मेक्सिको भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
अक्टोबर 15, 2021 करुणा चन्दना मेक्सिको, भिसा
मेक्सिको सबै को लागी केहि संग एक छुट्टी हो। यसबाहेक, महामारी को बावजुद, देश विश्वव्यापी पर्यटकहरु को लागी सुलभ रहन्छ। यो धेरै देशहरु को लागी एक नि: शुल्क भिसा संग छ। जे होस् तपाइँ आगमन मा एक स्वास्थ्य फाराम भर्नु पर्छ। त्यहाँ छ
मेक्सिको बाट टर्की भिसा
अगस्ट 27, 2021 शुभम शर्मा मेक्सिको, यात्रा, टर्की, भिसा
मेक्सिको बाट साधारण, सेवा र विशेष पासपोर्ट धारकहरु टर्की गणतन्त्र मा प्रवेश गर्नु अघि एक भिसा प्राप्त गर्न को लागी आवश्यक छ। यदि तपाइँसँग एक शेन्जेन, बेलायत, क्यानाडा, जापान वा अमेरिका भिसा छ वा तपाइँ यी देशहरु मध्ये एक को निवासी हुनुहुन्छ
मेक्सिको को लागी भिसा मुक्त देशहरु! यहाँ जाँच गर्नुहोस्!
जुलाई 29, 2021 करुणा चन्दना मेक्सिको
मेक्सिकन नागरिकहरु को लागी भिसा आवश्यकताहरु अधिकारीहरु द्वारा प्रशासनिक प्रवेश प्रतिबन्ध हो। अप्रिल 7, २०२० को अनुसार, मेक्सिकन नागरिकहरु लाई १५। देशहरुमा भिसा रहित वा भिसा मा आगमन पहुँच थियो। साथै, मेक्सिकन पासपोर्ट २३ औं यात्रा स्वतन्त्रता रैंकिंग क्षेत्रहरु। अनुसार छ
मेक्सिकोमा भाडा हाउसको लागत
डिसेम्बर 4, 2020 मैत्री झा आवास, मेक्सिको
के तपाईं मेक्सिकोमा स्थान परिवर्तन गर्न विचार गर्दै हुनुहुन्छ? यससँग अगाडि बढ्नका लागि विचारहरू विभिन्न छन्। यो खाना, संस्कृति र इकोसिस्टमको डायस्पोराको साथ संसारमा ११ औं सर्वाधिक जनसंख्या भएको राष्ट्र हो। २०० 11 मा, राष्ट्रले आफ्नो स्वास्थ्यसेवालाई सर्वव्यापीकरण गर्‍यो
क्याबो सान लुकासमा गर्नका लागि
अक्टोबर 30, 2020 एन्टिका कुमारी मेक्सिको, के कुराहरू
काबो सान लुकासमा धेरै चीजहरू छन्। काबो सानमा कोही पनि पटक्कै विचलित हुँदैन किनकि लुकासको सबै र सबै कुरा पत्ता लगाउने पर्याप्त समय कहिल्यै हुँदैन। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग स्थान को बारे मा उपयोगी जानकारी छ र